सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाएर राज्यकोषलाई अर्बांै रुपैयाँ घाटा पार्ने र आफ्नो स्वार्थ्सिद्ध गर्ने खेल वर्षांैदेखिको हो । यस्तो खेलमा भूमाफियाको ठूलो गिरोह सक्रिय रहँदै आएको छ । मुलुकमा पछिल्ला
नेपालमा ‘समृद्ध नेपाल खुशी नेपाली’को बाँसुरी बज्न थालेको धेरै समय बितिसक्यो । मुलुकको अर्थतन्त्र र शासकीय क्षमताले यो मूलमन्त्र सार्थक भए पनि नभए पनि हामी नेपाली स्वतस्र्फूत समृद्धिको यात्रामा लम्किसकेका
चितवनवासीलाई औलोको प्रकोपबाट मुक्त गर्ने अभिप्रायले वि.सं. ०१३ मा महेन्द्र आदर्श चिकित्सालयका नाममा स्थापित भरतपुर अस्पतालले स्तरीय उपचार सेवासँगै प्रगतिपथमा लम्कन सफल भएको छ । भरतपुर अस्पताल जिल्ला, प्रदेश हुँदै
नयाँ वर्ष ०७६ को अवसर पारेर गत आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमार्फत करिब ३ सय ५० जना व्यक्तिलाई पदक तथा सम्मान प्रदान गरिएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा नेपाल रत्न, महाउज्ज्वल राष्ट्रदीप,
नयाँ वर्षको आगमनसँगै देशविदेशमा रहेका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुले सामाजिक सञ्जालका भित्तोभरि सुख, शान्ति र समृद्धिको कामना गर्दै शुभेच्छा प्रकट गरिरहेका छन् । नयाँ वर्षले पाइला टेके पनि नेपालीहरुमा उमंग भने
नेपाली नयाँ वर्षको शुरुवात भएको छ । थुप्रै आशा, अपेक्षा र चाहनालाई पूरा गर्नै पर्ने जिम्मेवारीसहित नयाँ वर्ष २०७६ लाई स्वागत गरिएको छ । मुलुकमा स्थिर, दुई तिहाइको सरकार छ
नेपालमा चैत–बैशाख सुरु भएसंगै विपतको याम सुरु भयो भन्ने चलन छ । चैते हुरीले लैजाला भन्ने त आहान नै बनेको छ । चैते हुरीको मात्रै कुरा सुन्दै आएका नेपालीले बारा
पानी हाम्रो जिन्दगानी
मानवजीवनका लागि पानीको उपलब्धता जति जरुरी छ, त्यति नै खानेपानीको शुद्धतामा ध्यान दिनु जरुरी छ । किनभने, अनेकन रोगहरुको कारक पनि खानेपानी नै बन्ने गरेको छ । पानीमार्फत फैलिने रोगका
सागर खनाल पृथु टेक्निकल कलेज लमही, दाङ नेपालको कुल जनसंख्याको करिब ७० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या गाउँमा बस्छन् भने करिब ६५ प्रतिशत जनसंख्या कृषि पेसामा निर्भर छन् । बढ्दो जनसंख्यालाई खाद्यान्न
डाक्टरी आन्दोलन र दीर्घकालीन समाधानको उपाय
सरकारी अस्पतालमा कार्यरत देशैभरिका डाक्टरहरू अहिले आन्दोलनमा छन् । उनीहरुकै कारण स्वास्थ्य सेवा ठप्पजस्तै भएको छ । चिकित्सकहरूले अप्रेसनसमेत गरेका छैनन् । काठमाडौंका वीर, ट्रमा सेन्टर, प्रसूति, कान्ति, शुक्रराजलगायतका अस्पतालमा
आत्महत्याको भयानक अवस्था
चितवनको भरतपुर महानगर– १८ स्थित शशीनगरमा केही दिनअघि कहाली लाग्दो घटना भयो । एउटै परिवारका आमा, छोरा र छोरीले घरको बलोमा पासो लगाएर सामूहिक आत्महत्या गरे । यस्तो अप्राकृतिक मृत्यु
विक्रम बाबाको मेला सफल बनाऔं
यही चैत्र २२ गते शुक्रबारदेखि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र विक्रम बाबाको भव्य मेला शुरु भएको छ । १५ दिनसम्म सञ्चालन हुने मेलामा यसपटक प्लास्टिकका झोला निषेध गरिएको छ । विक्रम बाबाको
सहकारीहरु गाभ्नै पर्छ
नेपालमा चैत्र २० गते ६२औँ सहकारी दिवस मनाइँदा च्याउसरी उम्रिएका सहकारीको व्यवस्थापन र एकीकरणमा चुनौती देखिएको छ । हरेक टोलमा एकै प्रकृतिका सहकारी खुले पनि तिनको गुणात्मक विकास हुन सकिरहेको
कहिलेसम्म हचुवाको भरमा भविष्यवाणी ?
हाम्रो देशमा मौसमको भविष्यवाणी हचुवाकै भरमा हुँदै आएको पाइएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले केही दिनअघि मौसमको भविष्यवाणी गर्दै देशका केही भागमा मेघ गर्जनसहित वर्षा हुने अनुमान गरेको
मेट्रोरेल असम्भव छ र ?
खोकनादेखि बुढानीलकण्ठसम्म करिब २५ किलोमिटर र नागढुंगादेखि धुलिखेलसम्म करिब ४५ किलोमिटर क्षेत्रमा मेट्रोरेलको सम्भावना अध्ययन गर्न लागिएको हो । जसमध्ये खोकना–बुढानीलकण्ठ रुटको लगनखेल–महाराजगन्ज चोक खण्डको १० किलोटिर क्षेत्रमा डीपीआर प्रक्रियाका
पीडितलाई सक्दो सहयोग गरौं
हामी नेपालीलाई कहिले प्रकृतिले, कहिले विपद्ले त कहिले नियतिले पटक–पटक अग्निपरीक्षा लिइरहेको छ । नेपालमा सामान्य ठानिएको हावाहुरीले आँधीबेहरीकै रुपधारण गरी बारा, पर्सालगायतका जिल्लामा आइतबार राति वितण्डा मच्चाएको छ ।
प्रश्नपत्र आउट गर्नेलाई कडा कारबाही होस्
देशैभर शान्तिपूर्णरुपमा एसईई परीक्षा भइरहेको समाचारको मसी पनि सुक्न नपाउँदै प्रदेश नं. २ मा चौबीसै घन्टा सुरक्षा घेराभित्र रहने प्रश्नपत्र परीक्षा हुनुभन्दा १२ घन्टाअघि नै सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो ।
नागरिकताका विषयमा लचक हुने कि !
नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३८ मा महिलाको हकको व्यवस्था छ । उपधारा १ मा ‘प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभावविना समान वंशीय हक हुनेछ’ भनिएको छ । तर, लामो
अनुगमनका नाममा परीक्षार्थीलाई नतर्साऊ
माध्यमिक तहको मुख्य कडीका रुपमा लिईने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) देशभर सञ्चालन भैरहेको छ । चैतको १० गतेदेखि सञ्चालन भएको परीक्षामा गण्डकी प्रदेशबाट ४८ हजार १ सय विद्यार्थी सामेल भएका
मेडिकल कलेज विवाद सामान्य होइन
पोखरास्थित गण्डकी मेडिकल कलेजमा लागेको ताला खुलेको छ । ताला खुलेसँगै विद्यार्थीको परीक्षामा सहभागिताको बाटो खुलेको छ । तर जे कारणले कलेजमा ताला लाग्यो, त्यो विषय भने अझै टुंगिएको छैन